Ukubuka kwe-Garmisch - Ukuhlanza Okukhazimulayo - Ubhavu Oshisayo Oyimfihlo - I-Airbnb
Ukubuka kwe-Garmisch - Ukuhlanza Okukhazimulayo - Ubhavu Oshisayo Oyimfihlo
Siyabona ukuthi ukuqalisa kabusha uhambo phakathi kwe-Covid-19 kukukhathaza. Siyakuqonda futhi sibheka ukuphepha kwakho njengento ehamba phambili yethu. Sinikeza lezi ziqinisekiso: Ikhiphedi egcwalisiwe engenamuntu ongathintwa ongathintwayo. Zonke izindawo zenziwe sanitized kabili. Ilineni liwashwa kabili. Okubaluleke kakhulu, siqapha isikhathi sokujika esidinga ubuncane bamahora amane phakathi kwezivakashi. Sihlala esizeni, sizolungisa ishejuli yethu isiqinisekiso sokuthi i-Garmisch View izohlanzwa futhi iphephe ukuze uhlale nathi.
Indawo yokungena yangasese - Igumbi lokulala likaGarmisch View nendawo evamile yakhelwe wena nje ngokuthinta i-European Elegance. I-Dish Television, i-Netflix, i-Wireless yamahhala, nokufudumala kwekhaya.
Igumbi lokulala elihle langasese elilodwa, igumbi lokugeza elilodwa, ibha emanzi, nendawo yomlilo. Indawo yokungena yangasese, ubhavu oshisayo, nendawo yepatio. Kutholwe imizuzu ukusuka ezitolo zedolobha laseLeavenworth's Bavarian Villages kanye nemisebenzi. Ukubuka okumangazayo, indawo yokuhlala enhle enomuzwa wezwe elithulile. Izinyathelo zokupaka zamahhala ezivela kuyunithi yakho. Sikhawulela ngokuqinile i-Garmisch View ezivakashini ezimbili.
4.99 · 350 okushiwo abanye
Itholakala eduze noNorth Road endaweni yezolimo lapho kuvame khona izingadi zezithelo nezindawo zewayini, i-Garmisch View inikeza ukubukwa okunwebekayo nomuzwa wezwe elithulile.
Njengoba uneminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni sokwamukela izihambi, abasingathi bakho u-Jordan no-Annette bajwayelene nenqwaba yezindawo zokudlela, izitolo, abahlinzeki bempahla kanye nolunye ulwazi lwendawo esingathanda ukwabelana ngalo njengoba uhlela ukuvakasha kwakho e-Leavenworth.
Njengoba uneminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni sokwamukela izihambi, abasingathi bakho u-Jordan no-Annette bajwayelene nenqwaba yezindawo zokudlela, izitolo, abahlinzeki bemp…